စည်းချက်မှန်မှန် – မြန်မာသတင်းစုံ
Posted on March 5, 2021 Author admin	Comments Off on စည်းချက်မှန်မှန်
ကျနော့နာမည်က ဆက်ပိုင် အသက်က ၂၀ ရန်ကုန် စက်မှုဇုံတခုမှာ ကားဝပ်ရှော့လုပ်သည် ။ မမနာမည်က မိုးမိုးခိုင် အသက်က ၃၀ ဝန်းကျင် အသားဖြူဖြူ တောင့်တောင့်ဖြောင့်ဖြောင့် ကျနော့်ကားဝပ်ရှော့ဆရာရဲ့အမဖြစ်သည် ။ ကျနော်နဲ့ မမဟာ တစ်အိမ်ထဲနေကြတာမို့ စလိုက် နောက်လိုက်နဲ့ အလွန်ရင်းနှီသည် မနက်ခင်းမမဈေးသွားတိုင်းနဲ့ မမသွားချင်တဲ့နေရာတိုင်းကိုလဲ ကျနော်က လိုက်ပို့ပေးရသဖြင့်ပြောမနာဆိုမနာ ကိုယ့်အကြောင်းသူ့ပြောပြ သူ့အကြောင့်ကိုယ့်ပြောပြနဲ့ တကယ့်မောင်နှမအရင်းတွေပမာ ရင်းနှီးနေကြသည် မမမှာ ယောက်ျားရှိကြောင်းနဲ့ သူ့နဲ့လက်ထပ်ပြီး လပိုင်းအကြာမှာ ယောက္ခမတွေက သူ့ယောက်ျားကို ကိုးရီးယားကို အလုပ်သွားလုပ်ခိုင်းကြောင်းနဲ့ မမကမလိုက်စေချင်ပေမဲ့ မမစကားနားမထောင်ပဲ သူ့မိဘစကားကိုနားထောင်ပြီးလိုက်သွားကြောင်း ပြောသည် ။ တစ်နေ့မှာတော့ တိုက်တိုက်ဆိုင်ဆိုင် ကျနော့်ဆရာတို့ တဆိုင်လုံးနီးပါး သူ့တို့ဇာတိ မြင်းခြံဘက်ကိုပြန်သွားကြပြီး မမကတော့ သူ့ယောက်ျားဘက်ကအမျိုးတွေယောက္ခမတွေနဲ့ မတွေ့ချင် စကားမပြောချင်လို့ ဆိုပြီး ဆိုင်မှာ ဆိုင်စောင့်အဖြစ် မမနဲ့ ကျနော်နဲ့ နေခဲ့ကြသည် ။
ထိုနေ့က ကျနော်လဲထုံးစံအတိုင်း ဆရာတို့မရှိသဖြင့် အပြင်ထွက် ဘီယာလေး ၂ ခွက်လောက်သောက်မယ်စိတ်ကူးနဲ့ ဘီယာဆိုင်ဘက်ထွက်လာခဲ့သည် ဘီယာဆိုင်ရောက်လို့သိပ်မကြာခင် မိုးကသည်းကြီးမဲကီးရွာချသဖြင့် မိုးတိတ်အောင်စောင့်ရင် ဘီယာသောက်နေလိုက်တာ ၆ ခွက်မြောက်ရှိပြီ လူလဲ အတော့်ကိုမူးနေပြီ အချိန်ကလဲ ည ၁၀ နာရီကျော်ပြီ ဆိုင်ကလဲပိတ်တော့မည်မို့ မိုးသည်းထဲမှာပဲ အိမ်ကိုပြန်ခဲ့သည် အိမ်ရောက်တော့ တံခါးတွေပိတ်ထားလို့ မမကိုအော်နှိုးလိုက်တော့ အိပ်ချင်မူးတူးနဲ့မမ တံခါးလာဖွင့်ပေးသည်… အားပါး…မမရယ်… ညဝတ်တောက်လျောက်အင်္ကျိလေးနဲ့ အသားဖြူဖြူ မို့မို့မောက်မောက် ရင်သား လေးနဲ့ အရမ်းအရမ်းကို လှနေတဲ့မမ မူးနေတဲ့ ကျနော် စိတ်ရိုင်းတွေဝင်လာပြီ ။ ထုံစံအတိုင်း မမသည် ဗျစ်တောက်ဗျစ်တောက်နဲ့ပြောဆိုးပြီး ရှေ့ကနေအိမ်ထဲဝင်သွားပြန်တော့ ကျနော့်မှာ စိတ်ရိုင်းတွေပိုဝင်သွားသည် အတွင်းခံမပါ စွင့်ကားပြီး ညဝတ် အင်္ကျီအောက်မှာ လှချင်တိုင်းလှနေတဲ့ မမဖင်ကြီး ကျနော့်စိတ်တွေမထိန်းနိုင်တော့ပြီ နောက်ကနေအတင်းဖက် မမနို့ကြီးတွေကိုဆွဲကိုင် အတင်းဝင်လုံး နှုက်ခမ်းတွေအတင်းစုပ်နဲ့။
မမမှာ ရုန်းချိန်တောင်မရလိုက်ဖဲ ကျနော်ပြုသမျှအောက်မှာ အံ့သြမှင်သက်နေပုံရပြီး ခဏနေမှ ကျနော့လက်တွေကို တွန်းဖယ် ဖို့ကြိုးစားသည် ဒါပေမဲ့ ယောက်ျား နဲ့ တစ်နှစ်ကျော်ကြာ ဝေးနေတာမို့ သူ့လက်တွေက အားမပါ …….။ ယောက္ခမတွေနဲ့မတွေ့ချင်လို့ဟု အကြောင်းပြကာ မိုးမိုးခိုင် ရွာလိုက်မသွားဖဲ အိမ်စောင့်နေခဲ့သည် တကယ်တော့ မိုးခိုင် ဆက်ပိုင်နဲ့ အတူနေခဲ့ချင်၍ ဥာဏ်များပြီးနေခဲ့ချင်းဖြစ်သည် အသားဖြူဖြူ အရပ်ရှည်ရှည် နဲ့ ဆက်ပိုင် ဆိုတဲ့ ကောင်လေးကို သူမ ကျိပ်ကြွေနေသည်မှာ ကြာပြီ ဘယ်လိုပင် ရေလာအောင်မြောင်းပေးပေး အလွန်ရိုးသားတဲ့ မောင်လေးကတော့ ဘာမှမသိတာလား မသိချင်ယောင်ပဲဆောင်တာလားမသိ ဘယ်လိုမှ မရိုးမသားစကားကိုမပြောချေ… ဒီနေ့တော့ မိုးခိုင် သူ့ကိုအပိုင်သိမ်းမည်ဟု ဆုံးဖြတ်ထားပြီ အတွင်းခံတခုမှဝတ်မထားပဲ ညဝတ်အင်္ကျီပါးပါးလေးနဲ့ သူအလာကို စောင့်နေမိသည် ကံကောင်းချင်တော့ ရာသီဥတုကပါ ကိုယ့်ဘက်ပါပြီး ကူညီလေသည် ။ မမခိုင် မမခိုင်.. .. အိမ်ရှေ့က အော်ခေါ်သံကြားသဖြင့် မိုးခိုင် အိပ်ချင်မူးတူပုံစံနဲ့ အလှဆုံးဖြစ်အောင် ပြင်ဆင်ပြီး တံခါးသွားဖွင့်ပေးလိုက်သည် အားပါး..ကောင်းလေးကြည့်ရတာအတော်မူးနေပြီပဲ။
အတွေးနဲ့ မိုးခိုင် ပညာကုန်ထုပ်သုံးပြီး သူ့ချစ်သူပုံစံမျိုးနဲ့ စကားကို မထိခလုပ်ထိခလုပ်ပြောပြီ သူ့ရှေ့ကနေ ဖင်ကြီးတွေကို တမင်လှုပ်ပြီလျှောက်ပြလိုက်သည်။ ဆက်ပိုင်သည် မမခိုင်နှုတ်ခမ်းတွေကိုအငမ်းမရစုပ်သည် လက်တဖက်က နို့ကြီးတွေကိုအတင်းပွတ်သပ်နေပြီး ကျန်လက်တဖက်က တောက်လျှောက်ပေါ်ကနေ မမခိုင်ဖင်းကြီးတွေကို အတင်းပွတ်နေသည် နှစ်ယောက်သလုံးအသက်ရှုသံတွေပြင်းထန်နေပြီ မိုးခိုင်သည်လဲ မောင့်နှုတ်ခမ်းတွေကို ပြန်စုတ်သည် လက်တဖက်က မောင့်လီးဆီရောက်နေပြီး အသာပွတ်ဆွဲပေးနေပြီး ကျန်လက်တဖက်ကတော့ အရမ်းချစ်ရတဲ့မောင့်ကြောပြင်လေးကို ကြင်ကြင်နာနာပွတ်ပေးနေသည် ။ ဆက်ပိုင်စိတ်တွေအရမ်းကြွနေပြီမို့ တောက်လျှောက်အင်္ကျီကိုအတင်းဆွဲချွတ်ဖို့ကြိုးစားသည် မရ.. ဘယ်လိုချွတ်ရမှန်းမသိဖြစ်နေသည်.. ”မမခိုင်.. မောင်လေးမနေနိုင်တော့ဘူး အရမ်းလုပ်ချင်နေပြီ ” ”အင်းမောင်လေး မမတို့ အထဲသွားရအောင်နော် ” ဟုဆိုကာ ပိုင်စိုးပိုင်နင်းနဲ့ မောင့်ခါးလေးကိုဖက်ပြီး မိုးခိုင် သူ့အခန်းထဲကိုခေါ်ခဲ့လိုက်သည် အထဲရောက်တော့ မိုးခိုင် အလိုက်တသိပဲ တောက်လျှောက်အင်္ကျီကို သူကိုယ်တိုင် ချွတ်ပေးလိုက်သည်.. ။
အားပါး လှလိုက်တာမမရယ် အသားဖြူဖြူနဲ့ စွင့်ကားမို့မောက်နေတဲ့ ရွှေရင်နှစ်မွှာ ဖင်ကြီးနှလုံး တင့်တင့်ထွန်းတို့ စိုးမြတ်နန္ဒာတို့ထက်ပင်လှသည်ဟု ဆက်ပိုင်စိတ်ထဲ မှတ်ချက်ပြုလိုက်သည် ဆက်ပိုင်သည် လိုးဖူးတဲ့အတွေ့ကြုံမရှိပေမဲ့ ဇာတ်ကားတွေတော့ အတော်များများကြည့်ဖူးထားသည်မို့ သူဘာလုပ်ရမလဲဆိုတာ သိသည် မဆိုင်းမတွပင် မိုးခို်င်ရဲ့ ရွှေရင်နှစ်မွှာကို အသာဆွဲစို့သည်။ လက်တဖက်က မမခိုင်ရဲ့ ဆံနွယ်လေးတွေကို ပွတ်သတ်ပေးနေပြီး ကျန်လက်တဖက်ကတော့ မမခိုင်ရဲ့ ကျောပြင်နဲ့ ခန္ဒာကိုအပေါ်ပိုင်းကိုအသာပွတ်သတ်ပေးနေသည် .. ယောက်ျားနဲ့ဝေးနေတာကြာပြီဖြစ်တဲ့မိုးခိုင် သူချစ်တဲ့ မောင်လေးရဲ့ အပြုအစုတွေအောက်မှာ အရမ်းကိုဖီးတွေတက်နေပြီ အသားဖြူသူပီးပီ စောက်ရည်တွေကလဲ ပေါင်ပေါ်ထိ စီးကြနေပြီ… မောင်ရယ်.. ဘယ်လိုတွေလုပ်နေတာလဲကွယ် မမ မခံစားနိုင်တော့ဘူး လုပ်ပါတော့မောင်ရယ်… ”မမ မောင့်ကိုချစ်လားဟင် ” ”အို…ဒီကလေးနှယ် ချစ်လို့မှ သူ့လီးပဲ မမအဖုတ်ထဲဝင်တော့မှာကို ” ဆက်ပိုင်ဘာမှပြန်မပြောတော့ပဲတစ်ဖြေးဖြေးနဲ့ သူ့ပါးစပ်တွေက မမခိုင်ချက်နားကိုးရောက်လာသည် ဆက်ပိုင်သည် ကြမ်းပြင်ပေါ် ဒူးထောက်ထိုင်လိုက်ပြီး မမခိုင်ကတော့ မတ်တပ်ရပ်နေသည်။
ဆက်ပိုင်လက်နှစ်ဖက်က မမခိုင်ဖင်ကြီးတွေကို အသာပွတ်ပေးနေပြီး နှုတ်ခမ်းတွေကတော့ရှေ့ကနေ ပေါင်အရင်းပိုင်းတွေကို အသာနမ်းနေသည် မမခိုင် ဖီးတွေအရမ်းကိုတက်နေပြီး ကော့ထိုးနေပြီ လက်နှစ်ဖက်က မောင့်ဆံပင်တွေကို အသာကျိပ်ဆွဲပြီး အံကြိတ်နေရသည် နောက်ဆုံး မောင့်နှုတ်ခမ်းတွေက အမှတ်မထင် မမစောက်ဖုတ်ပေါ်ရောက်လာချိန်မှာတော့ မမခိုင်အရမ်းကို ကော့ထိုးလန့်ဖြန့်သွားပြီး ”မောင် အဲ့လိုမလုပ်ပါနဲ့မောင်ရယ် ငရဲတွေကြီးကုန်ပါ့မယ် ” မမခိုင်ပါးစပ်ကသာပြောနေသည် လက်တွေကတော့ မောင့်ခေါင်းကို သူ့ပေါင်ကြားထဲ အတင်းဆွဲထည့်ထားပြီး ပေါင်နှက်ဖက်ကို အလိုက်သင့်ကားပေးလိုက်သည် သူ့ယောက်ျားတောင် သူ့စောက်ဖုတ်ကို အခုလို ယက်မပေးဖူးဘူးလေ ။ ဆက်ပိုင်သည် မမပေါင်နှစ်ချောင်းကိုအနည်ငယ်ဘေးဖြဲလိုက်ပီး ပါးစပ်နဲ့ စောက်စေ့ကို အစွမ်းကုန်ယက်ပေးသည် စောက်ခေါင်းအတွင်းထဲထိ လျှာကိုထိုးကလိသည် လက်နှစ်ဖက်ကတော့ ထုံးစံအတိုင်းမမဖင်ကြီးတွေကို အသာပွတ်ပေးလေသည် နှစ်မိနှစ်လောက် စောက်ဖုတ်ကို စပါယ်ရှယ်ယက်ပေးအပြီးမှာတော့ မမခိုင်အထွတ်ထိပ်ကိုရောက်ပြီ အကြောပေါင်းသောင်းခြောက်ထောင် ဓာတ်လိုက်သလိုခံစားရပြီး ကမ္ဘာအကောင်းဆုံးသောအရသာကို ခံစားသွားလေတော့သည် ….။
မမခိုင် သူ့ဆံပင်တွေကို အတင်းဆွဲနေပြီ ဖင်ကြီးတွေလဲကော့ထိုးနေပြီမို့ မမခိုင်ပြီးတော့မယ်ဆိုတာ သိလိုက်ပြီ ဆက်ပိုင်သည် စောက်ဖုတ်ကို အစွမ်းကုန်ယက်ပေးနေလိုက်ပြီး… မမခိုင်ဆီက ဟောဟဲအသံတွေထွက်လာပြီ စောက်ဖုတ်ကလဲ ဖွင့်လိုက် ပိတ်လိုက်ဖြစ်နေပြီမို့ မမခိုင်ပြီးသွားပြီဆိုတာ ဆက်ပိုင်သိလိုက်ပါပြီ စောက်ဖုတ်ယက်နေတာကနေအသာဖယ်လိုက်သည်.. မမခိုင်လဲ ကြမ်းပြင်ပေါ် ဒူးထောက် ပျော့ခွေကြသွားသည်……။ … ”မမ..ကောင်းလားဟင်” ”အင်း အရမ်းကောင်းတာပဲမောင်ရယ်” ”မမအမောပြေရင်ဆက်လုပ်ရအောင်နော်” ဟု မောင်က ပြောပြောဆိုဆို သူ့အင်္ကျီနဲ့ ပုဆိုးကို ချွတ်လိုက်သည်.. မောင့်လီးက အရမ်းကြီးမကြီးပေမဲ့ (လေးလက်မခွဲလောက်ရှိ) အသားဖြူသူမို့ မောင့်လီးက လှလှပပလေးနဲ့ ချစ်စရာကောင်းနေသည် တစ်ဆက်တည်း မမခိုင်ဘာဆက်လုပ်ရမည်ဆိုတာ သိလိုက်ပြီ သူ့အလှည့်ရောက်ပီလေ ။ မတ်တပ်ရပ်နေတဲ့ မောင့်နားသွားပြီး မောင့်လီးကို အသားလေးစုတ်ပေးလိုက်… ”အား…မမ…” ”ဟင်… မောင် ဘာဖြစ်တာလဲ” ”အရမ်းကောင်းလို့မမ တကိုယ်လုံးတွန့်လူးသွားတာပဲ ” မမခိုင် ပြုံးလိုက်သည် .. သူစုပ်ပေးတာ ကောင်းတယ်ဆိုတော့ ကျေနပ်တယ်လေ နာရီဝက်ခန့် စုတ်ပေးအပြီးမှာတော့ ဆက်ပိုင် မမခိုင်စောက်ဖုတ်ကို လိုးချင်လှပြီ မမခိုင်လဲ စိတ်တွေပြန်ထနေပြီဆိုတာ သိလိုက်ပြီမို့.. လိုးဖို့ စီစဉ်တော့သည် …။
မမခိုင်ကို ကြမ်းပြင်ပေါ်မတ်တပ်ရပ်စေပြီး ဆက်ပိုင်က နောက်ကနေမမခိုင်ကိုဖက်ထားလိုက်သည် ရှေ့က ဒူးလောက်ရှိတဲ့ ကုတင်ပေါ်ကိုမမခိုင်လက်ထောက်ခိုင်းပြီး မမခိုင်ကို လေးဘက်ကုန်းလိုးဖို့စီစဉ်လိုက်သည် ။ စွင့်ကားနေတဲ့ဖင်ကြီးတွေနဲ့ မို့ဖောင်းလားတဲ့ စောက်ဖုတ်ကြီးက ဆက်ပိုင်ကို အတင်းလိုးဖို့ တွန်းအားပေးလေပြီမို့ ဆက်ပိုင် ခပ်သွက်သွက်ပဲ သူ့လီးကို မမခိုင်စောက်ဖုတ်ထဲ တစ်ခါးတည်းထည့်လိုက်သည်… ”အား..မောင် ဖြေးဖြေး” ”စောရီးမမ မောင် အရမ်းစိတ်တွေထန်နေလို့ပါ” ”အင်း” ”မောင်ဆက်လုပ်တော့မယ်နော်” ”အင်း” ဆက်ပိုင်သည် သူ့လီးကို ဖြေးဖြေးချင်းဆွဲထုပ်ပြီး အသာပြန်သွင်း လုပ်လေသည် … စည်းချက်မှန်မှန်နဲ့ အချက်တရာလောက်လုပ်အပီးမှာတော့ ဆက်ပိုက် စိတ်တွေ အတော်ကိုပြင်းထန်လာပြီ… မမခိုင်လဲ လီးစုပ်ပေးကတည်းကစိတ်တွေကပြင်းထန်နေပြီမို့ ပီးချင်နေပြီ လူပျိုပေမဲ့ ဘီယာသောက်ထားတဲ့အရှိန်ကြောင့်သာ ဒီလောက်ကြာကြာလုပ်နိုင်တာဖြစ်ကြောင်းသူသိလေသည်။ ”မမ” ”ဟင်.. ပြောလေမောင် မမဘယ်လိုနေပေးရမလဲ ပက်လက်လှန်ပေးရမလား ” ”ရတယ်မမ ဒီအတိုင်းပဲလိုးမယ် မောင်ပီးချင်နေပြီ” ”အင်း မမလဲပီးချင်နေပြီ” ”အာ့ဆို အစွမ်းကုန်လုပ်ပီနော်” ”အင်း” ဆက်ပိုင်သည် မမခိုင် ဖင်ကြီးနှလုံးကို လက်နှက်ဖက်နဲ့ဆွဲဆွဲပီး အသားကုန်ဆောင့်လိုးတော့သည် အသံတွေဆူညံနေတာလဲ ဂရုမစိုက်နိုင်တော့ … မူးနေတဲ့အရှိန်ကြောင့် ဆက်ပိုင်သည် ပီးချင်နေပေမဲ့ သုတ်ရေကတော်တော်နဲ့မထွက်ဖြစ်နေပြီး အချက် ၅၀၀ လောက်အစွမ်းကုန်ဆောင့်လိုးအပြီးမှာတော့ မမခိုင် ကော ဆက်ပိုင်ကော တစ်လောကလုံးကိုမေ့ပြီး အကောင်းတကာ့အကောင်းဆုံးသော လူ့စီးစိမ်ကို တစ်ပြိုင်းတည်း ခံစားလေးကြတော့သတည်း……..ပြီးပါပြီ ။
အဖြစ်အပျက်တွေကကကြာသေးသေးတော.အခုချိန်ထိမျက် နှာပူနေတုန်းပါပဲ။မထင်မှတ်ပဲဖြစ်ပျက်ခဲ.တာတွေကက တူမလေးအသက်နှစ်ဆယ်ြ ပြည်.မွေးနေ.လေးပေါ………… ကျွန်တော.နာမည်ကမြတ်သူအသက်ကသုံးဆယ်.ခွန် အလုပ်ကတော.ပန်းချီဆရာတစ်ယောက်ပါ။ပြီးတော. အပျော်တမ်းဓာတ်ပုံဆိုင်လေးလဲဖွင်.ထားသေးတယ် ကျွန်တော.မှာမွေးချင်းညီအကိုနှစ်ယောက်ရှိတယ် အကိုကြီးကကျွန်တော်ဆယ်.ငါးနှစ်သားမှာအိမ်ထောင်ကျပြီး အခုကျွန်တော.မှာချစ်စရာကောင်းတဲ.တူမလေးတစ်ယောက် ရှိတယ်ကျွန်တော.မရီဘက်တူသွားလို.အသားကဖြူဖွေးအု နေပြီးမျက်နှာသွယ်သွယ်လေးနဲ.ဆံပင်ကကျောလည်လောက် ရှိတယ်ခနာကိုယ်လေးကတော.သွယ်သွယ်လျှလျှနဲ.ခေတ် ဆန်ပြီးပွင်.ပွင်.လင်းလင်းပြောတက်ဆိုတက် ဆက်ဆီ ကျကျ ဝတ်တက်စားတက်တော.ပတ်ဝန်းကျင်မှာသူ.ကိုလိုက်နေ ကြတဲ.ကောင်လေးတေတပုံကြီးပေါ.။ တစ်ခါတစ်လေတော. လည်းကောင်လေးတွေတူမလေးအနာ.ကပ်ကာစာကားပြောနေ ရင်နည်းနည်းတော.အူတိုစိတ်တွေဖြစ်မိတာတော.အမှန်ပါပဲ တူမလေးနာမည်ကဆုနှင်းဝေကျွန်တော်ကတော.ချစ်စနိုးနဲ. ဆုလို.ပဲခေါ်ပါတယ်။ အကိုကြီးတို.မိသားစုနဲ.ကျွန်တော်ကအတူတူမနေဘူးဗျဒါ ပေမယ်.လည်းအဝေးကြီးတော.မဟုတ်ပါဘူးတစ်ခြံကျော် လေးပါမိဘတွေအမွေပေးထားတဲ.ကိုယ်.ခြံနဲ.ကိုနေကြတာ ကျွန်တော်ကလူပျိုကြီးပေါ.မချစ်တက်လို.တော.မဟုတ်ပါ ဘူးကျွန်တော.ဒဏ်မခံနိုင်ကြလို.ပြေးကြတာချည်းပဲကျွန် တော်ကတော်တော်ထန်တဲ.အထဲမှာပါတဲ.သူပေါ. လွန်ခဲ.တဲ.နှစ်လလောက်ကတောင်တူမလေးနဲ.မတိမ်းမရိမ်း ချာတိတ်မလေးတစ်ယောက်နဲ.ညိလိုက်သေးတယ် ကောင်မလေးနာမည်ကသရဖီကျွန်တော်ကတော. ခလေးလို.ပဲခေါ်တယ်ရည်းစားဖြစ်ပြီးသုံးရက်ပဲရှိသေးတယ် ကောင်မလေးကိုကျွန်တော်.အိမ်ခေါ်ဖြုတ်လိုက်တာပဲ သရဖီကညိုချောလေးဂျောလေးကကိတ်ပြီးတင်းနေတာပဲ ပေါင်တံလေးနှစ်ချောင်းကစင်းလို.နို.လေးနှစ်လုံးကလည်း ကော.ပြီးချွန်နေတာပဲကျွန်တော်သရဖီလေးကိုအပြီကို ကြိတ်တာသရဖီရဲ.စောက်ဖုတ်လေးကညိုပြီးဖောင်းနေတာပဲ လိုးခါနီးလေးစောက်မွေးတွေရိတ်ခိုင်းပြီးဘာဂျာမှုတ်ပေးလိုက် တာကောင်မလေးမှာထွန်.ထွန်.ကိုလူးလို.။ သူမရဲ.နို.နှစ်လုံး ကိုလည်းစိတ်ကြိုက်ညစ်ချေနယ်ပြီးစို.ပေးတော.ကောင်မလေး ကကျွန်တော.လီးကို.သူမရဲ.စောက်ဖုတ်ဝကိုအတင်းတေ.ပေး တော.တာပဲ။ ကျွန်တော်ကလည်းအလိုက်သင်.လေးဆောင်.ထိုး သွင်းပြီးအသားကုန်ဆောင်.လိုးတာကောင်မလေးခမျှာအော် လိုက်တာဗျာ။ ကျွန်တော.လီးကလည်းသာမန်လီးတွေထက်တော.ပိုပြီးရှည်တုတ်လဲတုတ်တော.ကောင်မလေးရဲ.စောက် ဖုတ်လေးကလီးထိုးသွင်းလိုက်တာနဲ.ပြဲကနဲပြဲကနဲပဲလီးချောင်း ကြီးကိုအပြင်ပြန်ဆွဲထုတ်လိုက်ရင်စောက်ဖုတ်အတွင်းနှစ်လွှာက အတင်းစုပ်ငုံပြီးအပြင်ဘက်ကပ်ပါလာတာကြည်.ရင်းလိုးရတာ အရမ်းကိုဖီးရှိလှပါတယ်ပက်လက်လှန်ဖြဲပြီးအပေါ်ကဖိလိုးတာ ကောင်မလေးမှာတအီးအီးတအားနဲ.ညဉ်းကာဖီးတွေလှိမ်.တက် ပြီးစောက်ရည်တွေပန်းထွက်လာတာနဲ.သူမကိုလေးဘက်ထောက်ပြောင်ကုန်းခိုင်းပြီးဖင်ထောင်ပြီးလိုးတာအားရပါရပါပဲ ကောင်မလေးကလည်းအံကြိတ်ပြီးတော.ကိုခံတာကျွန်တော် […]
ကောင်မလေးလာခါနီးပြီ… ကျော်နိုင် လက်ကနာ၇ီကိုကြည့်ပြီး အချက်ပြတယ်.. ကျွှန်တော်နှင့်ကုလား ရယ်ဒိ ပဲဆိုတဲ့သဘော ခေါင်းငြိမ့်ပြလိုက်တယ်၊ ဟော.. ဟိုဘက်လမ်းကြားထဲကနေ ကောင်မလေး လှုပ်လီလှုပ်လဲ့နဲ. လှမ်းလာနြေ့ပီ။ လွယ်အိတ်လေး ကိုလွယ်ပြီး ထမင်းချိုင့်လေးဆွဲလာတဲ့ ကောင်မလေးဟာ ကျော်နိုင့်ကို မြင်တော့ တစ်ချက်တုံ့.ကနဲဇြစ်သွားတယ်။ ပြီးတော့ဂ၇ုစိုက်စ၇ာမလိုဘူး ဆိုတဲ့ဒီဇိုင်းနှင့် မျက်မှောင်လေးကြုံ.ပြီး ခပ်တင်းတင်းဆက်လျှောက်လာတယ်။ သူ ခြေလှမ်း လှမ်းလိုက်တိုင်းမှာ ပေါင်တံ လုံးလုံးလေးဟာ ဆင်စွယ်နှာမောင်းလေးလို ဝင်းကနဲ တင်းတင်းလေး ပေါ်ပေါ်လာတယ်၊တစ်ချက်တစ်ချက် မျက်နှာပေါ်ဝဲကျလာတဲံ့ ဆံနွယ်လေးကို မေးလေးဆတ်ြ့ပီး ခါထုတ်လိုက် ၇င် ပေါင်ကြားထဲက ငပဲ ဆတ်ကနဲ မတ်လာအောင် ဆွဲငင်အား ကောင်းလှပါတယ်။ ကျော်နိုင်လဲဒါတွေ စွဲပြီး ကောင်မလေးကိုလိုက်တာလေ။ ကောင်မလေးက ကိုးတန်းကျောင်းသူ မနက် ရှစ် နာ၇ီလောက်ဆို ဒီလမ်းကြားလေးအတိုင်း ကျူ၇ှင်သွားလေ့၇ှိတယ်။ကျော်နိုင်က စောင့်ြ့ပီးရည်းစားစကားပြောတယ်။ […]
ရထေုပျလေး ၂ထုပျနဲ့ ရှတေ့နျးမှာ အသကျပေးခဲ့တဲ့ မုံရှာမွို့မှ သူရဲကောငျး ” ကိုနိုငျဝငျး ” ရဲ့ မိသားစုလေးပါ…